Lomano-MNS Valisoa: olona 6 hampianariny maimaim-poana - ewa.mg
News - Lomano-MNS Valisoa: olona 6 hampianariny maimaim-poana
amin-dRasoanjanahary Valisoaniaina ny fitiavana milomano ka tiany
hampitaina amin’ny mpiara-belona aminy. Araka izany, hanomboka
hisokatra amin’ny volana oktobra izao ny fampianarany ny taranja
lomano. Hisy ny fisarihana ataony ka olona enina hahazo ny
fampianarana maimaim-poana, fisarihana hatao ny faran’ny volana
izao. Raha ny fantatra, efa 30 taona izao ny niangalian’ity Maitre
Nageur Sauveteur (MNS) ity ny taranja lomano ary lehibe tao amin’ny
klioban’ny Cosbani izy. Nambaran’i Valisoa fa nankatoavin’ny
Ministeran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena ary ny Akademia
Nasionaly ny Spaoro, ny maha Maitre Nageur azy.
Marihina fa misokatra ho an’ny
rehetra ny fampianarana. Fitaovana manaraka ny fivoarana sy ny
fenitra iraisam-pirenena ny hampiasaina ary harahi-maso tsara
avokoa ireo rehetra mianatra lomano, raha ny fanazavana hatrany.
“Tiako ny lomano ary niainako nandritra ny taona maro fa tiako
lavitra ny mizara izany fahaizako izany amin’ny hafa”, hoy ny
L’article Lomano-MNS Valisoa: olona 6 hampianariny maimaim-poana a été récupéré chez Newsmada.
Rotary district 9220: governora vaovao i Rajasundaram Somasundaram
Miavaka ny fandraisan’i Madagasikara ny fivoriambe faha 23 ho an’ny Rotary district 9220. Homena lanja ao anatin’ny hetsika koa ny fampirantiana ny vokatry ny asa tanana eto an-toerana. Hifarana, rahampitso, ny fivoriambe faha-23 ny district 9220 ho an’ny Rotary international, nandraisan’ny firenena fito (i Madagasikara, i Kaomoro, i Djibouti, i La Réunion, i Maorisy, i Mayotte ary i Seychelles) anjara teny amin’ny CCI Ivato nanomboka ny alarobia lasa teo. 800 ny rotarianina manatrika ny fihaonana eto Madagasikara ka vahiny avy amin’ny firenena mpikambana ao amin’ny district avokoa ny 200. Tanjon’ny fihaonana ny handinihna ny tondrozotra iarahan’ny rotarianina maneran-tany ho an’ny taona 2019-2020 izay hivoy ny hoe: “aleo mifandray hatrany” (soyons connectés), araka ny fanazavan’ny filohan’ny fivoriambe, Rasamimanana Tiana. Ankoatra ny fifankahalalana eo amin’ny samy mpikambana, fotoana koa hifaneraserana sy fifanakalozana ny hefarana eto Antananarivo. Nandefa solontena koa ny Rotary avy any Gabon, iraka avy amin’ny Rotary iraisam-pirenena. Ankoatra ny asa soa iombonan’ny club rehetra, manana fifandraisana momba ny asa koa izy ireo.Tao anatin’ny fivoriambe koa no hanatanterahana ny famindrana ny fitantanana amin’ny governora vaovaon’ny district 9220, i Rajasundaram Somasundaram, (Seychelles) avy amin’ny governora teo aloha, i Shelly Oukabay (Madagasikara). Herintaona ny faharetan’ny taom-piasana. Mifototra amin’ny sehatra enina ny asan’ny rotarianina: fahasalamana, fanabeazana, fahazoana rano madio, fifandraisan’ny mpiara-belona, fandriampahalemana… Mifototra amin’io sehatra io avokoa ny tetikasa tanterahin’ny firenena fito mpikambana. Tsy voatery miainga avy amin’ny fangatahan’ny mponina ny tetikasa fa rehefa mahatsapa ny mpikambana amin’ny rotary club iray fa ilaina izany, manao ny asa izy ireo sy ny mpiray ombon’antoka.“Ankoatra ny fivoriambe, nisy koa ny fiofanana ho an’ny governora vaovao sy ny mpitantana ny club rehetra handray ny fitarihana ho an’ny taona 2019-2020”, hoy ny governora teo aloha, i Shelly Oukabay. Manampy izay ny famelabelaran-kevitra samihafa manodidina ny lohahevitra maro. Hisy fanokanana ny tsangambato eny Ivato ary mamarana ny fivoriambe ny lanonana famindrana ny fitantanana eo amin’ny governora roa.Vonjy A. L’article Rotary district 9220: governora vaovao i Rajasundaram Somasundaram a été récupéré chez Newsmada.
Tsy ao anaty lisi-pifidianana kanefa efa nifidy tamin’ny fifidianana filohampirenena 2018. Nahitana tranga tahaka izany teny amin’ny biraom-pifidianana EPP Ambatofotsy Gara, kaominina Tsiafahy ny marainan’ny fifidianana solombavambahoaka, ny 27 mey 2019. Efatra ireo mpifidy no tsy tao anaty lisi-pifidianana. Niakatra ny isan’ny mpifidy dia nihoatra 700 ny isan’ny mpifidy tao amin’ny birao fandatsaham-bato iray ka rehefa mihoatra dia tsy maintsy hanaovana biraom-pifidianana hafa, araka ny lazain’ny lalàna. Izany no mety mahatonga ilay mpifidy tsy ao anatin’ny lisi-pifidianana tao amin’ilay birao nandehanany tamin’ny fifidianana filohampirenena. Azo antoka 100 isan-jato anefa fa any amin’ny birao fandatsaham-bato hafa ny anarany satria tsy nisy ny fanesorana anarana tao amin’ny lisi-pifidianana », hoy ny filohan’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI), Rakotomanana Hery nandritra ny fitsidihana ireo biraom-pifidianana teny amin’ny distrikan’Atsimondrano. Raha ny tranga teny amin’ny birao fandatsaham-bato teny amin’ny EPP Ambatofotsy Gara nefa dia latsaky latsaky ny 700 ny isan’ny mpifidy ao anaty lisitra (650). Nambaran’ny filohan’ny CENI fa nizotra araka ny tokony ho izy ny tapak’andro ny fifidianana solombavambahoaka. Ny lesoka tsy maintsy misy hoy izy fa ny fanatanterahana ny fifidianana am-pitoniana no tokony atao. Ny olana goavana dia tsy tonga indray ny mpifidy. Raha ny hita teny amin’ny biraom-pifidianana notsidihany dia nanodidina ny 7 ka hatramin’ny 10 % ny taham-pahavitrahan’ny mpifidy hatramin’ny 10 ora sy sasany maraina. Nisy tamin’ireo biraom-pifidianana no mpifidy 35 ka hatramin’ny 50 amin’ny 650 no mbola nanefa ny adidiny. Nanomboka teo amin’ny biraom-pifidianana LTP Alarobia nitohy teny amin’ny LTP Tefiso Mahasima Sud, EPP Tanjombato ary nifarana teny amin’ny EPP Ambatofotsy Gara ny fitsidihana nataony niaraka tamin’ireo mpanaramaso iraisampirenena momba fifidianana (PNUD,SADC, Union Africaine, Union Européenne, Norvège…). Lynda A. Horonan-tsary Cet article FIFIDIANANA SOLOMBAVAMBAHOAKA: Ny mpifidy indray no tsy tonga est apparu en premier sur déliremadagascar.
Fanafihana tanàna :: Nandoro trano sady namono olona iray ny dahalo
Nandravarava ny dahalo nanafika tany Ambaribe, distrikan’Anjozorobe, afak’omaly alina. Nandroba omby izy ireo sady nandoro trano ary mbola nitifitra ka nahafaty lehilahy iray, enina amby roapolo taona. Am-polony ny omby lasan’ireo dahalo. Kila forehitra ny tranon-tsarety iray. Soa fa haingana ny fifehezana ny afo izay tsy niitatra teo amin’ny trano manodidina. Tamin’ny valo ora sy sasany alina tany ho any no nisehoan’ ny fanafihana. Dimy ambin’ny folo lahy ireo dahalo nirongo basy mahery vaika “Kalachnikov” sy MAS 36 ary basim-borona. Nirefodrefotra ny poa-basy nampihorohoroana ny olona teo an-tanàna. Tonga teny an-toerana ny zandary, minitra maromaro taorian’izay. Nahetsika avy hatrany ny vatan-dehilahy teo an-tanàna nanao ny fanarahan-dia niaraka tamin’ireo mpitandro filaminana. Narahina ihany koa ny dian’ny omby. “Tsy mbola fantatra tamin’io alina io ny isan’ny omby lasan’ ny dahalo. Tafaverina kosa ny valo ambin’ny folo tamin’ireo biby, taorian’ny fanenjehana nataonay sy ny fokonolona. Maty nofirafirain’ireo olon-dratsy ny omby roa. Iraika ambin’ny folo ny omby mbola karohina, amin’izao fotoana izao (Ndrl: omaly)”, araka ny fanampim-baovao avy amin’ny zandary.Nanao fizahana teo amin’ny manodidina ny tanàna ny mponina sy ny zandary, ny maraina. Hita tao anaty bozaka ny vatana mangatsiakan’ny lehilahy iray, niaraka tamin’ny diam-bala teo amin’ ny lamosiny. “Mpivahiny tonga nikarama tao Ambaribe io lehilahy maty io sady niofana ho Zazamena na irony andrimasom-pokonolona irony. Nanampy ny fokonolona niambina izy, tamin’ iny alina iny ka tamin’izany no nahavoatifitra azy. Nahitana taim-bala ana basy MAS36 efatra sy basim-borona iray ihany koa teo amin’ny manodidina », hoy ihany ny zandary. L’article Fanafihana tanàna :: Nandoro trano sady namono olona iray ny dahalo est apparu en premier sur AoRaha.